Qondaaltonni Xaalibaan Moskoo keessatti mootummaa Raashiyaa waliin mari’achuu gabaafame - NuuralHudaa
On Sep 15, 2019 1
Dubbii himaan Waajjira Xaalibaan Dohatti argamuu Suheeyl Shahiin akka jedhetti, qondaaltonni Xaalibaan Jum’aa dheengaddaa gara Moskoo imaluun, mariin nageenyaa Ameerikaa fi Xaalibaan jalqabanii turan, haala itti fufuu dandayu irratti mootummaa Raashiyaa waliin kan mari’atan tahuu ibse.
Mariin Xaalibaan fi Ameerikaan ji’oota 11 dabran Qaxar magaalaa Dohaa keessatti geggeessaa turan, walii galteedhaan xumuruuf kan dhihaate tahuu ibsamee ture. Haa ta’u malee haleellaa torbee tokko dura Afgaanistaan keessatti raawwatame hordofuun, Prezdaant Donald Tramp Alhada dabre marii nageenyaa walii galteen goolabuun duratti, hoggantoota Xaalibaan waliin iccitiin wal arguuf karoora qabatee ture haquu beeksise.
Gareen Xaalibaan gama isaatiin marii addaan cite kana itti fufuudhaaf ammas fedhii akka qabu mootummaa Raashiyaatiif kan ibse tahuus odeeyfannoon argame ni addeessa. Dubbi himaan garee Xaalibaan Suheeyl Shahiin “Ameerikaan marii nageenyaa xumura irra gahe, kan mallattoon qofti hafe addaan kutuun isii hedduu nu dinqisiise” jedhe. Dabalataanis qondaaltonni Xaalibaan Ameerikaa keessatti Traamp waliin wal arguun duratti, Qaxar wixinee sanadii walii galtee qophaahe ifa akka gootu kan barbaadan tahuu ibsame.